Indlela ukubona ixesha lishushu pa parlour
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Indlela ukubona ixesha lishushu pa parlour
Ke zone eshushu okanye ixesha indlela ixesha elingakanani na, ukuze aviwe kakuhle. izowuni yexesha ashinyeneyo, kuxhomekeke kwimeko pa nakwesiphi na indawo kunye nobume kunye neentengiso zokusebenza, uya kuza ezinye umahluko kukuba ngaphandle ngokupheleleyo. Ngowe, ngoba ndicinga izowuni yexesha hayi ashinyeneyo asazi, apha siza kwazisa pa parlour jikelele izowuni yexesha zamafu.
zamafu kunye nezowuni yexesha, oko kukuthi, nesendlu pa kuya kuba izowuni yexesha a owawuza ungathanda ukwandisa ukusebenza. 'S izowuni ithemba ukuza abathengi kakhulu. Ngoko ke, kummandla loo ixesha, usenokuba weza watyala into ecaleni pa parlour. Umzekelo, jonga kakuhle i umehluko ixesha phakathi evulekileyo. Kwezinye iimeko
1 imodeli kuphela, ukuze ayeke ezininzi imifuziselo, kukho kwakhona ityala ukuba avulwa ngexesha umahluko. Kwaye ke ezifana 13 ngentsimbi wavula kunye ngentsimbi 18 imodeli evulekileyo, ndicinga ukuba abanye abantu siyibonile zazisiwe. Inyaniso ukuba unalo ixesha umahluko evulekileyo, kukuba ofuna isebenza ngelo xesha. Kwaye, xa imodeli ukuba uba kobekujoliswe umahluko ixesha evulekileyo, okanye sentlalo Horukon ubude lufakwa iimoto ezimbalwa ngokubanzi, thina okanye zama ukuvula ngaphezu uhlengahlengiso nail kunesiqhelo.
ndidlala loya umahluko ixesha evulekileyo, ndicinga ukuba yindlela elungileyo ukuze aphumelele.
Ukongeza, ukuba onjalo ixesha umahluko evulekileyo, indlela uthetha ummandla ixesha evuthayo okanye, kakhulu ngentsimbi pm ukusuka malunga 3:00 emva kwemini 5 okanye 6, kunye kwizowuni yexesha zamafu ngaphezulu kwe Injongo yesi Nakuba kuwe. Kweli izowuni yexesha, kunye nesizathu sokuba ashinyeneyo izowuni yexesha, abantu beza Tomokazu kukuthi, wenze utyalomali ukusa kwinqanaba elithile.
Ukongeza, iinkcukacha imini odlulileyo, ekubeni idatha ye iiyure ezimbalwa ngosuku iyabonakala, kunokuba aye Tomokazu, ndimi kuba kungenzeka ukuba ukhethe. Ukuba kum nenjongo le qonga iingqameko phantsi, imane hit kuzo zonke etafileni, oko kuya kuba luncedo.
ngoku kukho imifuziselo ukuba baxhotyiswe inomsebenzisi ebizwa engenamnini okuba nomahluko. Le yi ezivenkileni, kodwa ngaphandle isusa linokuba ukwahluka abagxothwa, loo nto kwakhona ukuba xa begqiba kudluliselwa kusuku olulandelayo. enjalo Pati Ukuba ufumana ivenkile Nko, ukuze athi Tomokazu izowuni yexesha nayo ashinyeneyo.
Noko ke, ukufumana le amathuba ukwahluka kokulinganisa, nam ezifana Miyabureru le ngaso, ngenxa yokuba kufuneka sikhumbule ceke, kodwa kuya kufuneka bafunde kancinane, kodwa, ukuba uyibheke Tomokazu, eqinisekileyo amathuba ezinombala sangaphakathi kuba inguqulelo ukuba wena, bekuya yayigqityiwe kunye notyalo amancinane ukuba bazobe kwizikrelemnqa. Ukuba eli xesha, ukuba ezifana amathuba ingekho ephakamileyo, kungekhona izowuni yexesha ukuba ukuqinisa simo. All of
umatshini pa, ekubeni ROM ilawulwa, ngaphandle kokuba ube remote control, kungenxa kube ezivenkileni ecaleni akunakwenzeka zokuzisebenzisa. Noko ke, kuxhomekeke iziganeko kwicala izowuni yexesha kunye neevenkile ukuba wavuswa ngaphambili, oko ijolise izityalo iya kakhulu iingqameko phantsi. ixesha siganeko, yaye anjengala ezivenkileni ngamnye kwakhona kwi yesalathisi, zama ejolise izowuni yexesha a enokuba eyiyo mali.